KASHIFAAD: Yaa Banneeyay Boobka Bacadlihii Xamar Weyne? + Video - Caasimada Online
Home Warar KASHIFAAD: Yaa Banneeyay Boobka Bacadlihii Xamar Weyne? + Video
KASHIFAAD: Yaa Banneeyay Boobka Bacadlihii Xamar Weyne? + Video
Haddaba markii aan arrinkaasi baaritaan ku sameynay ayaan ogaanay in ay wax ka jiraan eedeymaha ay ganacsatadu soo jeediyeen.
Waxaa inoo suuragashay inaan la xiriirno waxna ka weydiino arrinkaan Dr Cabdi Axmed Siyaad oo muddo toban sano ka badan ahaa Garyaqaankii dowladda hose, isagoo muddo dheerna ahaa la taliyaha xagga sharciga ee duqa magaalada Muqdisho. Dr Siyaad, wuxuu sidoo kale bare ka ahaa kulliyaddii qaynuunka ee Jaamacaddii Soomaaliya, waaxdeeda qaynuunka madaniga ah. Mar aan wax ka weydiinnay waxa uu ka ogyahay murankan ku saabsan suuqa bacadlaha, ayuu garyaqaanku noo xaqiijiyay in suuqaas ay horay u sharciyaysay dolwaddii dhexe, loona qaybiyay ganacsatadii hore, ayadoo waliba ganacsade waliba lambarka dukaankiisa uu ku helay baqtiyaanasiib meel fagaare ah lagu qabtay.
Arrintaasi waxay welwel weyn ku abuurtay ganaacsada Soomaaliyeed oo rajaynayey marka dalku yeesho dawlad rasmi ah in cabashayoon-kooda wax laga qaban doono, ay ugu horeyso in dawladdu tixgeliso sharciyadii dawladdii dhexe ay ku bixisay Suuqa Bacadlaha.
War cusub: Waxaa shalay Oct 17, 2012 uu afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cusmaan sheegay in dib loo dhigay baqtiyaanasiibka lagu qeybin lahaa qololka suuqa Bacadlaha Xamarweyne ilaa 25-ka Octobar 2012. Afhayeenka ayaa arrintaas asbuuca dib loogudhigay baqsiyaansiibka ay tahay “cillad farsamo”, waxana uu sheegay in 25-ka Oct baqsiyaanasiibka lagu qaban doono Hotel City Plaza ee Muqdisho.
Daawo Video-ga hoose oo ah July 27, 2012 warkii uu TVka Horn ka duubay Ganacsatadii Hore Ee Suuqa Bacadlaha Degmada Xamar. Ganacsatadaas oo xitaa haysta Nuqulka Wargeyskii XIDDIGTA OKTOBAR oo ay ku qoran yihiin magacdooda iyo lambarada dukaamada ay xilligaas dawladii dhexe bixisay.
Waxaa diyaarisay SomaliTalk